MARKA 7.1–13	F. 4 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 7.1–13	F. 4
Niangona teo akaikin’i Jesoa ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna. Araka ny hitantsika teo aloha, ny vahoaka nihazakazaka nanatona an’i Jesoa, miandrandra fampianarana, fanafahana, fanasitranana. Ireto mpitondra fivavahana Jiosy kosa atosiky ny fialonana (noho i Jesoa nahazo olona marobe nanaraka azy), dia mitady hevitra hanomezana tsiny Azy !
Inona tokoa no manosika ahy hanatona an’i Jesoa ao anatin’ny fanompoam-pivavahana? Filan-javatra, te hameno fahalalana, fahazarana sa fiandrandrana fiainana?
Notsinian’ireto lohandohan’ny mpisorona ireto ny mpianatr’i Jesosy fa tsy manasa tanana alohan’ny hisakafoana (2), tsy noho ny fahadiovana (règle d’hygiène) mba hikolokoloana ny vatana izay tempolin’Andriamanitra fa noho ny hoe tokony hitana ny fampianarana voatolotry ny razana (3). Mpihatsaraivelatsihy (6) no ilazan’i Jesoa azy ireo satria tsy tena fiainana ilay fanarahana ny lalàna fa fisehoana ivelany. Mampieritreritra!
Manajà ny Rainao sy ny Reninao (Eksodosy 20.12). Amin’ireto Fariseo sy mpanora-dalana ireto anefa dia tsy maninona na tsy mihevitra sy tsy manisy soa ny Ray aman-dReny aza fa nahatanteraka ny fanatitra tokony ho an’Andriamanitra (11). Dia ahoana izany? Nandika ny lalàna iray mba hahatanterahana ny iray? Tsy marina ihany izany! Voafatotry ny lalàn’olombelona tokoa ireto mpitondra fivavahana ireto ary manery ny olona ho voafatotra tahaka azy (12).
Fandinihan-tena : Manao ahoana tokoa ny fanehoako fitiavana amin’ireny Ray aman-dReny ireny ? Sao dia lany any ivelany manenjika asa fanompoana etsy sy eroa ka tsy misy atolotra ho azy ireo intsony ?
Tena tsy ho tanteratsika mihitsy tokoa ny lalàna. Soa fa tonga i Jesoa hanafaka antsika tamin’ny ozon’ny lalàna (Galatiana 3.13), mba hahazoantsika manompo Azy tsy an-tery fa amin’ny fitiavana.